Momba anay - Ningbo Runner Co., Ltd.
Ningbo Runner, natsangana tamin'ny 2002, dia orinasan'ny Runner Group. Izahay dia iray amin'ireo mpamatsy voalohany ny vokatra ao an-trano, ary nanolo-tena hanome ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay. Androany izahay dia mpanamboatra manambatra mampiditra fikarohana, famolavolana & famokarana, ary miorina afovoany ao Ningbo fibodoana 140.000 metatra toradroa ny sehatry ny fanamboarana sy ny trano fanatobiana entana. Miankina amin'ny fikarohana ara-teknolojia matanjaka sy ny fahaizan'ny mpamokatra haingam-pandeha, ary koa ny fifandraisana mirindra amin'ireo mpanjifanay, nanangana ny lazanay manerantany izahay, ary ny vokatray dia nanarona an'i Amerika Avaratra, Eropa, Moyen Orient ary Amerika atsimo.
PIPE HANGERS HVAC BATH PLUMBING FRANSA AIR
HENDRENA HO AN'NY HOAVY
Ny orinasa dia eo amin'ny sehatry ny fampidirana sy fampiroboroboana ny indostria sy fampidirana fampahalalana. Izy io dia nanamboatra andalana famokarana mandroso toy ny famolavolana manan-tsaina, fitsaboana maitso maitso ary fivondronana manan-tsaina, ary nahatsapa tsikelikely ny fampidirana ny rafitry ny fanatanterahana ny famokarana MES, ny rafitra PLM sy ny rafitra ERP, ary koa ny foibe logistika telo refy ary tena rafi-pitantanana fitantanana rojom-bolo mifandrindra hanomezana ny mpanjifa zon'ny mpanjifa miorina tsara sy mahomby kokoa.
Synergetic fampahalalana mahira-tsaina